Moramanga – Ambatondrazaka (RN 44): “Tsy misy asa manomboka any an-toerana hatramin’izao …” | NewsMada
Moramanga – Ambatondrazaka (RN 44): “Tsy misy asa manomboka any an-toerana hatramin’izao …”
Manaitra ny tompon’andraikitra, hatrany amin’ny fiadidiana ny Repoblika, ireo kaoperativa mampiasa ny lalana RN44, Moramanga – Ambatondrazaka. “Tsy misy asa manomboka any hatramin’izao », hoy izy ireo.
« Tsy misy asa manomboka any an-toerana hatramin’izao, taorian’ny fametrahan’ny filoha Rajoelina Andry ny vatofototra ho fanombohana ny asa fanamboarana ny lalana RN 44, ny tapaky ny volana oktobra teo. Tsy hita intsony ireo fitaovana vaventy, nentina naseho vahoaka tamin’io fotoana nametrahana vatofototra io », hoy ny mpamily ao amin’ny kaoperativa iray. Koa manaitra ny minisiteran’ny Asa vaventy, hatrany amin’ny fiadidiana ny Repoblika, izy momba izao toe-javatra izao.
Ho avy indray ny fotoam-pahavaratra koa ahina ho tapaka tanteraka iny lalana iny, nampanantenaina fa ho vita ao anatin’ny 18 volana. “Ho betsaka ny fahavoazana sy ny fatiantoka haterak’izany. “Entam-barotra ny ankamaroan’ireo midina any Ambatondrazaka, ary ny vokatra no miakatra”, hoy ilay mpampily nampita hafatra. Midika izany fa hikatso ny asan’ireo mpivarotra ireo, atahorana tsy hisy ny famatsiana ireo entana ilain’ny mponina andavanandro (PPN). Tsy afaka hiasa mandra-pahatonga ny haintany manaraka indray ireo kaoperativa ireo, hampitombo indray ny tsy fananana asa.
Manomboka mihotsaka ny tetezan’i Ranofotsy, lava indrindra amin’ny RN 44, amin’ny tendrony avaratra andrefana. Efa miparitaka ny tampony andalovan’ny fiara. Tsy mahazaka fiara mavesatra ny tsivalan-kazo eo amin’io tampon-tetezana io. Mbola tetezan-kazo moa izy io, saingy fonjamby lehibe no ianteheran’ireo tsivalan-kazo diavin’ny fiara. Isan’ireny fiara ireny ireo mitondra kraoma, milanja hatrany amin’ny 35 t, araka ny resaka heno tamin’ireo kaoperativa mpitatitra.
Ambohidray – Vohidiala, 158 km, manodidina ny 5 ora sy 30 mn ny hanaovana azy. “Ny 4 novambra tamin’ny fandalovanay tamin’iny lalana iny, miisa 85 ny fiara vaventy nifanena sy niray zotra tamin’ny fiara nombanay. Mirezareza mitondra bolongana hazo kesika mavesatra ny maro amin’izy ireo”, hoy ny mpandeha iray. “Ho avy izao ny orana, ho sarotra ny hanao fiviliana raha sanatria rava io tetezana io satria mahery ny riandrano amin’izay. Maika ny hanamboarana io tetezana io avy hatrany, tsy iandrasana tetikasa mbola tsy hita mangirana”, hoy hatrany ireo mpampiasa iny lalana RN 44 iny.
Rarivo sy R.Mathieu